FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
Emva kokumitha kangangeenyanga ezimbini, le kati idla ngokuzala amantshontsho amathathu
KUNGORHATYA, kwintlango eyomileyo, yaye kuthi thu ingada emngxunyeni wayo, ihambe umganyana nje ize ime. Iyalaqaza ize ithi ntaa iindletyana zayo ngathi iyakrokra. Emva koko iyakhasa njengoko inqumla kulo mmandla wesanti.
Ngesiquphe, le kati itsibela impuku ebidakasa nje ingaboni ukuba kuza ingozi. Emva koko iyaqhubeka izingela, ize imane inqaku-nqakula namanye amaxhoba. Xa ifumana ukutya okuninzi kakhulu, okunye ikufihla ngaphantsi kwesanti. Ibuyela kwangonyezi emngxunyeni wayo yaye ayifane iphume emini. Makhe sithi gqaba-gqaba ngesi silwanyana.
Iindlebe zale kati zibukhali, kangangokuba iyakwazi ukuva ixhoba naxa sele liphantsi komhlaba
Xa ifuna ithokazi, inkunzi yenza umkhulungwane. Ekubeni iindlebe zale kati zibukhali ngeyona ndlela, ithokazi liyakwazi ukuva inkunzi ekhala kumgama omde
Uboya obukwiinyawo zale kati buyinceda ingatshoni xa ihamba esantini yaye buyikhusela kubushushu besanti
Umphakathi wendlebe nganye unoboya obumhlophe, obukhusela iindlebe kugquthe lwesanti
Kunzima ukulandela umkhondo wale kati, kuba iinyawo zayo ezogqunywe buboya zenza ingashiyi mzila xa inyathela
Ikati yasentlango iyakwazi ukuphila ngamanzi ewafumana xa isitya ixhoba
Isanti yeNtlango ekuthiwa yiKara-Kum itshisa kakhulu, kangangokuba amaqondo obushushu akhe afike nakuma-80 ngokukaCelsius. Ngamanye amaxesha imozulu yayo iye iqhaqhazelise amazinyo
Iindawo efumaneka kuzo le kati: Kumbindi weSahara, kwelama-Arabhu nakwiindawo ezithile zoMbindi Asiya
Ubunzima: Iinkunzi ziba phakathi kweekhilogram ezimbini ukuya kwezintathu
Ubungakanani: Phakathi kweesentimitha eziyi-40 ukuya kweziyi-57
Umsila: Uba phakathi kweesentimitha eziyi-20 ukuya kweziyi-30
Imikhwa yayo: Imbuna xa ithelekiswa nezinye iikati zasendle ezidla ngokuba neengcwangu